Kedu ihe onye geomatist kwesịrị ịma banyere ọkọlọtọ nchịkwa LADM - Geofumadas
Gịnị a geomatics ga mara ọkọlọtọ LADM ala ochichi
Jenụwarị, 2014 cadastre, Geospatial - GIS, Land Management
A maara LADM dị ka ọkọlọtọ nlekọta ala (Ngalaba Nchịkwa Nchịkwa), nke mere ka ọ bụrụ ISO 19152 sitere na 2012.
Ọ bụghị sọftụwia, kama ọ bụ usoro nlere anya na-egosipụta mmekọrịta dị n'etiti ndị mmadụ na ala ahụ; na-edozi ihe dị ka mba ọ bụla dị iche na ọkachamara; ọ bụ usoro ihe eji arụ ọrụ nke ihe na Cadastre 2014 ka ewere dị ka ihe nkịtị. Ọ na-achọ izere nrụpụta na mmezigharị otu arụmọrụ site na isi nke nwere ike ịgbasa ma mee ka ọ dịkwuo mfe maka ụlọ ọrụ iji kpọtụrụ ndị ọrụ tozuru etozu na gburugburu ụwa.
N'ịmara na ndị na-ahụ maka ihe gbasara mbara igwe na ndị mmadụ jikọtara na geomatics chọrọ ịma otú e si akọwa ụdị, anyị na-eme mmega ahụ iji kọwaa njirimara nke ọkọlọtọ a site na oge ahụ mgbe e weere ya dị ka CCDM.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na LADM, n'otu akụkụ nke ịṅụ anwụrụ ọkụ dị mfe, na-atụ aro na nchịkwa nke ala bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na oge, ọ gbanwebeghị n'ime ọtụtụ puku afọ:
Ihe mejupụtara ya bụ mmekọrịta dị n'etiti mmadụ na ụwa. N'agbanyeghị ọdịbendị ebe a na-enyocha ya, akụkọ ihe mere eme na-egosi anyị ihe yiri ya: Ndị mmadụ, dị ka nke Adam na Iv, bụ ndị nọ na steeti nkịtị bụ ndị nnọchi anya na-elekọta Ogige Ubi nke Iden, ikike nke ịdị n'ime, ibu ọrụ maka ihe dị, na mmachibido iri nri site na osisi amachibidoro na iwu mmefu ma ọ bụrụ na ekweghị.
Na ubi a na-akpọ territorial akpọkwa (BAUnits) na a ikike ruru (RRR) na nketa oke, jikọrọ mmadụ (Party) site Source na na dị iche iche nke yiri nke gbasara ohere agabiga mbara igwe (Spacial Units).
Eziokwu bụ na dị ka usoro nlekọta njikwa ihe onwunwe na-aga n'iru, enwere okwu dị mgbagwoju anya na nrịba ndekọ dị mgbe ọ bụla, ma mgbe ichere ichere ihe nnọchianya ha, e nwere ikpe dịka:
Di na nwunye nwere 60% - 40% mmekọrịta nke ngwongwo nke mejuputara ulo 23 na ulo nke 4 nke ulo, nke ahu gunyekwara ikike ibanye ugbo ala ugbo ala abuo na okpuru ulo 1 na ikike nke ndi nile bi n’ime ulo. site n'ụlọ ahụ gaa n'ọnụ ụlọ ogologo nke ọkwa ọ bụla na ebe a na-amịkpọ anụ n'ụlọ nke asatọ. N'iwu n'ụzọ iwu, ọ dị mfe, edere ya naanị mana ka anyị jụọ onwe anyị otu anyị siri maa atụ na 3D cadastre, ma ọ bụ opekata mpe na 2.5 D.
Na LADM a na-achọ na ụzọ ịme ngosipụta nke echiche nke ikike ikike ala na ngwaọrụ kọmputa bụ otu. N'ihi na azụmaahịa ahụ bụ otu, ọ dịgasị obere na ọkara na usoro ndị akọwapụtara site na mba ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị. Obere omenala iji jikwaa ụdị na-eme ka ọ dị ka LADM bụ oke ikuku maka naanị ndị sayensị kọmputa, ikekwe n'ihi na a na-egosipụta ya na UML site na klaasị na mmekọrịta, agbanyeghị, onye nyocha a chọrọ na ọrụ ahụ bụ akụkụ nke ọrụ ahụ. 2014 Cadastre: «Ogologo ndụ ịme ngosi».
Ya mere, obu ihe omuma nke ihe omimi nke geospatial, lekwasiri anya na isi oru nke ochichi ala:
Debe ihe - Isiokwu - Mmekọrịta iwu Iwu (P - RRR - RO)
ma nye ozi gbasara ndekọ a.
Ihe nlere a choro ikwado nhazi nke teknụzụ nke, n'otu aka, onyinye (Intanet, ebe nchekwa data, ụdị ahaziri ahazi, ikikere isi mmalite na GIS) yana n'aka nke ọzọ, achọrọ maka ọrụ ga-eji teknụzụ a (gọọmentị) kọmputa, mmepe na-adigide, akwụkwọ elektrọnik na ntinye nke data na sistemụ ọha na eze). Otu uru nke LADM bụ na enwere ike ịmegharị ya na mba ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị iwu ya, nkewa nke cadastre na ndekọ aha, ma ọ bụ ụdị ngwa ọrụ a ga-eji rụọ ọrụ. Ọ na-atụ aro klaasị ọkọlọtọ, site na ebe ahụ ị nwere ike ịme klaasị mba-mba mana na njedebe echiche ahụ dakọtara.
The ukwuu nke LADM bụ na-ejikọ agụmakwụkwọ mgbalị site fig, atumatu maka Standardization na ugbua adị, dị ka Linz na LandXML of Australia / New Zealand, National Integrated Land System of America (tupu FGDC), mbak nke nhazi nke European Commission of Science and Technology (OBI), Kọmitii ISO / TC211 nke OGC ma gbasie mgba ike na oghere ndị nwere mmetụta dị elu. Ma ọ bụ na ihe siri ike banyere ịme ụkpụrụ bụ itinye ma ọ bụ tinyeghachi ihe ndị ọzọ rụburu.
La FIG a mụrụ na 2002, ọ na-agba mbọ imezi mbọ a na nnabata ya na atụmatụ ndị na-adịbeghị anya dịka okwu banyere Inspire na echiche IDE nke jidere gburugburu 2003. Ya mere, na obere usoro LADM gafere oge dị iche iche nke ngosi, mkparịta ụka na mmegharị nke dị iche iche nsụgharị ndị were aha obodo ebe e gosipụtara ha, ruo mgbe ha ghọrọ ISO 19152 nke 2012:
N'April nke 2002 enwere ike ime ihe na-ebili maka oge mbụ.
Na Septemba nke 2002, 1 na-egosi na OGC a na-akpọ Noordwijk, mgbe ahụ na Delft na COST Workshop.
Na March 2003 mbipute 2 akpọrọ Paris, n'otu afọ ahụ na FIG ma maka ụbọchị a OGC kwupụtara LPI
Na Septemba 2003 ụdị nke akpọrọ Brno ka ewepụtara na Poland. Maka ụbọchị a agbakwunyewo ndọtị nke 3D multipurpose cadastre. E gosipụtara ya na European Information Information Service EULIS.
Na 2004 4 mbipute a na-akpọ Bamberg, e gosipụtara na ihe omume ese onyinyo na Germany na Kenya.
Na 2005 mbipụta 5 ka akpọrọ Cairo, na FIG ihe omume n’Ijipt. Ka ọ na-erule mgbe ahụ, etinyere ụkpụrụ ndị OGC jisiri ike site na Kọmitii ISO / TC 211; Ọ bụ ezie na kọmitii a ebipụtala ihe karịrị ụkpụrụ 50 nke nnukwu mmasị na mpaghara geomatic, LADM na-ewepụ ebe a abụọ: Geometry and Topology). Nakwa maka ụbọchị a ọ ghọrọ Inspire's cadastral data details.
Na 2006 e gosipụtara ụdị 6 akpọ Moscow, nke bụ ụdị a nke anyị kwuru maka ya na Geofumadas n'isiokwu «ihe nlereanya maka cadastre«. Nke a na-agụnye Ewu RRR na Akụkụ nke ngwugwu akọwapụtara iche iche na klaasị niile na-acha odo odo.
Site na 2006 ruo 2008 mgbalị ahụ na-elekwasị anya nzere ntozu dị ka ọkọlọtọ.
Na October nke 2006, 1.0 Version ebulalarị ọ bụ ezie na ụbọchị ahụ ka a kpọrọ ya CCDM (Usoro Cadastral ngalaba).
Usoro nke ịtụgharị ya dị ka ọkọlọtọ ISO, site na nzukọ dị iche iche nke mkparịta ụka, mmeba na nkọwa doro anya nke claeses; Ọ na-agwụ na 2012 site na nyocha PhD nke Chrit Lemmen na 2012.
A ka nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-aga, ọtụtụ mba anabatalarị ọkọlọtọ, ọ bụ ezie na ọtụtụ ka ga-eme. Mgbe mgbalị nhazi a, enweela usoro mmejuputa na ịdaba na eziokwu, ebe e jikọtara njikọ na JRC (Joint Research Center nke European Commission) na UN-HABITAT (United Nations Agency for Human Settlements) iji tinye n'ọrụ. jikọtara njikwa mpaghara. Site na nke a, atụgharịala ihe atụ na mba dị iche iche, okwu nke STDM (Social Tenure Domain Model) guzo, nke a na-ahụta dị ka iche iche nke LADM, n'akụkụ FAO enwere Flossola na Honduras ihe ngosipụta SIGIT nke na-achọ ugbu a ịbawanye na SINAP.
Omume nke isiokwu a bụ na anyị na-anwa ịghọta mmalite nke LADM dabere na atụmatụ eserese. Ana m agbalị iji agba ndị yiri klaasị ihe atụ ahụ, bụ nke dị ugbu a na ọkọlọtọ akwadoro kewapụ akụkụ iwu na edo edo, onye na-acha akwụkwọ ndụ, ihe ndị na-acha anụnụ anụnụ, topography na pink na topology na-acha odo odo. Jide n'aka na iji akara ngosi ga-ewetara anyị mmekọrịta ụfọdụ site na mkpakọrịta mana ana m ekwusi ike; anyị kwesịrị ịmụta ịghọta ụdị. Verdagharị n’elu ihe na-egosi ihe ha pụtara.
[hsmap aha = »ladm»]
Ndị isi ụlọ ọrụ.
Atụmatụ ahụ malitere site na mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ atọ:
Party Mmasị (Isiokwu), na ọkọlọtọ akọwapụtara dị ka Party
Ihe nke iwu, nke na nke a na-ewere echiche archaic nke ibé ala nhazi ma na-ewega ya na ihe mpaghara. Na ọkọlọtọ ọ na-akpọ BAUnit, na Mpaghara Spatial Unit geometry.
Right, mmekọrịta na-ejikọta onye nwere ihe ahụ, na ọkọlọtọ akọwapụtara dị ka RRR.
Ihe nlere ahụ jikọtara ha site na isi iyi (Isi iyi). Nke a nwere ike ịbụ ihe ederede ma ọ bụ eziokwu; ọ bụ naanị eziokwu. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ:
Ọ bụghị naanị na enwere onye nwe ụlọ, mana ọ bụ otu ndị nketa, otu n'ime ha tụrụ mkpọrọ maka ndụ,
Ihe nkata ahụ nwere atụmatụ, mana ọ bụ na akwụkwọ, ọ nweghịkwa ọdịiche,
Ekpebisighi nke mpaghara a, kama ọ bụ naanị pacenti nke iwu… otu n'ime ụmụnne rere erere mmadụ anọ ọzọ ikike ya,
Akụkụ a nke eresị nwere ụlọ elu ekwentị mkpanaaka na ịnweta servidurmbre,
Akụkụ nke ebe a na-echebe ya nwere ọchịchị pụrụ iche,
Otu n'ime ụmụnne nwoke dị obere, yabụ nne ya nwere mmekọ nọchiri anya ya ...
Ma map maọbụ na enweghị, ma ọ bụ na ọ bụghị iwu, ma ọ bụ na ọ dabaghị na usoro ndị ahụ, ọ bụ eziokwu dị n'ebe ahụ. Ya mere, LADM nakweere na edere ya na eziokwu na-achịkwa ya, na-egosi ọnọdụ anụ ahụ na nke iwu.
Ndị nwere mmasị (Party)
Rịba ama na ebe a ka "isiokwu" dị mfe gbasaa na ndị dị iche iche metụtara azụmahịa ahụ. N'ihi ya, anyị nwere:
Njikọ iwu kwadoro, dị ka ọ dị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ
Nchikota nke ndi mmadu, dika okwu nke umu amaala, otu ndi otu, ndi ozo, na ndi ozo.
Onye ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akwado ikike, dị ka ikpe ọkàiwu ahụ
Onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke na-akwado nkwa nnyefe ahụ, dị ka ụlọ akụ ma ọ bụ ego
Onye na-eme ihe ngosi ahụ, dị ka onye nyocha.
Mmekọrịta nke ikike (RRR)
N'ebe a, na cadastre ọdịnala ọ bụ naanị ụdị nnabata. Ma a na-agbatị ihe nlereanya ahụ ka e wee nwee ike ịmekọrịta ọnọdụ dị iche iche nke mmekọrịta nke iwu na ibu ọrụ nchịkwa:
Na nnyefe ma ọ bụ njikọ
Mmetụta ndị ahụ, nke nwere ike ịbụ Mgbochi, Njirimara na Ọrụ.
Mmekọrịta nke nwe ya na isi iyi.
Ihe ihe ziri ezi
N'ebe a, ọkwa dị iche iche dị na klaasị, mana ihe niile na - amalite site na ihe akpọrọ ngalaba nhazi (BAUnit). Hụ na nke a bụ nkọwa nke ihe ahụ, ma anyị nwere maapụ ma ọ bụ akwụkwọ.
Nke a bụ, n'ihi na n'eziokwu enwere otu ihe, nke a ga-eji nwayọ dezie ya, mana BAUnit na-amalite site na nke ahụ na oge mbụ enwere ọnọdụ "ndị na-abụghị georeferenced":
Ihe a na-agaghị emeli, ya bụ, ihe a ga-ewepụ site na ibé ahụ, dịka ọ dị na ebe obibi mobile, eriri ekwentị, wdg.
Ihe nchọta nke ezigbo ala
Akwụkwọ na-abụghị nke ederede
Adreesị anụ ahụ nke na - akọwa ụlọ n'ime ụlọ, nke a nwere ike ịdị n'ihu n'ogo ụlọ n'ime ụlọ.
Mgbe ahụ, enwere ndị BAUnits nwere njirimara gbasara ohere, n'etiti ndị a, ha nwere ike ịbụ:
Ngwongwo a na-ahazighị ahazi (akụkụ nke ngwugwu), nke nwere ike ịbụ isi, akara nke oke na oke.
Atụmatụ ahụ a haziri ahazi, nke nwere ike ịbụ otu, ma ọ bụ ọtụtụ na - ejikọta otu ụlọ.
Otu uru dị na ịnabata ụdị LADM bụ na enweghị data ọ bụla eleghara anya, ọ nweghị ezigbo ma ọ bụ ihe ọjọọ cadastre, naanị eziokwu a gosipụtara. Ngalaba nchịkwa dị ma nwee ike melite nkenke site na:
Isi nke ndị na-akwụ ụtụ isi nke obodo nke na-ekwu okwu naanị na Excel.
Ka oge na-aga, ha nwere ike ịhazi, yana usoro nhazi nke oge ochie bụ ihe ngwọta dị mma.
Mgbe ahụ ị nwere ike ịme nkata, ma ọ bụghị oke nkenke.
Ihe niile na-emechi na njirimara nke oghere nke ibé ahụ, yana ọkwa ọkwa dị iche iche maka otu ihe kpatara ya "n'eziokwu anụ ahụ ihe ahụ bụ naanị otu". Ọ dịkwa mkpa na ọ bụghị naanị na iwu nzuzo ka egosiri, kamakwa iwu ọha dịka okwu banyere mpaghara echedoro ma ọ bụ ụlọ ọrụ gbasara ohere akọwapụtara na iwu dị iche iche dịka mpaghara ide mmiri nke na-ebute mmetụta na atụmatụ ahụ.
Ihe nnọchiteanya nke ihe ahụ.
Nke a bụ usoro klas pụrụ iche, nke na-enye ohere ịkọwapụta ụdị nnọchite anya ọdịdị ala nke otu ihe ahụ, ọ bụ ya mere ha ji jikọọ na isi iyi ahụ.
Ihe dị mkpa ebe a bụ na opekata mpe nke pere mpe bụ isi, nke bụ ọrụ dịịrị onye nyocha ahụ. Ọnọdụ dị iche iche maka 2D na 3D zuru ezu.
N'ihe banyere akụkụ abụọ, otu isi, mgbe ahụ oke ókè na arc-node mmekọ yana ọdịdị dị na geometry mechiri emechi. Otu ihe a dị maka 3D ọ bụ ezie na nke a bụ otu ikpe ọzọ bụ ihe 3D abụghị nke ihu.
Njikọ nke onyonyo onyonyo bụ site na isi iyi ahụ, na-eche na a ga-enwe akwụkwọ na-akọwa nkenke kachasị mma nke a na-apụghị ịbịaru na ndọtị nhazi dịka akụkụ nke ihe gbara ya gburugburu.
Na mmechi, LADM bụ ọkọlọtọ mara. Ọ bụ ngwongwo nke nkịtị ewepụtara na Cadastre 2014 nke anyị bịarutere; ọ bụ ezie na ya na ọtụtụ rụzuru na teknụzụ na agụmakwụkwọ akụkụ na ọtụtụ nsogbu na institutional na normative akụkụ.
Previous Post«Previous Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ezuru ohi iPad
Next Post 2014 amụma nke geofumado onodu: Paul RamseyNext »
8 Na-aza "Gịnị onye geomatist kwesịrị ịma banyere ọkọlọtọ LADM na-achịkwa ala"
Emmanuel kwuru, sị:
August, 2016 na
Ụlọ elu Renho Nke a bụ ncha nke foto http://es.slideshare.net/galvarezhn/el-ladm-implementado-utilizando-interlis
Emmanuel Cadastre Lerma Mexico kwuru, sị:
enyeghị m nkọwa ahụ mgbe m na-akwagharị akara ngosi
Marcela kwuru, sị:
June, 2016 na
Daalụ maka ịkekọrịta! ezigbo peeji
Ụlọ elu Renho kwuru, sị:
Ike, 2016 na
Hi, ị nwere ike ịnweta ppt na-egosi na foto ahụ
July, 2014 na
N'ezie, a na-emegharị ihe nlereanya ahụ na mba ahụ. Ọ bụrụ na mba kpebie na ụfọdụ data agaghị eji ya ... ọ naghị eji ya.
Ihe dị mkpa bụ na ụdị data ahụ na-eji ọkọlọtọ maka data na-emetụta.
David Rojas kwuru, sị:
Ọ bụrụ na o siri ike na Peru ka ị nwee ike ịbanye n'ụlọ iji nweta ozi data, ịnweta ihe niile achọrọ na LADM bụ ihe mgbagwoju anya. Ọbụna ihe mgbagwoju anya ka ị nweta data nke ise nke dị na Callao.
Susana kwuru, sị:
Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ otu n'ime ihe kachasị mma, ya mere enweghi obi abụọ na nke a na-ekwu na ọ bụ Jehoiada na 20minutos lystas, ị na-eso onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi.